Shiinaha ugu fiican Hydrophobic Perlite oo loo adeegsaday Warshadaha Nadiifinta Dibadda iyo Warshadda | Xinzheng
Hydrophobic Perlite saafi ah oo ugu fiican oo loo adeegsaday Nadiifinta Dibadda
Hydrophobic perlite waxaa lagu beddelaa biyo -biyood ku saleysan baalalka la ballaariyey si loo gaaro saameyn biyo -la'aan aad u fiican. Dhaqdhaqaaqiisa kuleylku wuu hooseeyaa, guud ahaan agagaarka 0.045W/mk, kan ugu hooseeyana waa 0.041W/mk Dusha sare waxay leedahay guluub galaas oo shaabadaysan, si ay Haydrophobic perlite u leedahay xoog cadaadis oo sahalna ma aha in la burburiyo, taas oo si weyn u yareyn karta heerka waxyeellada inta la isticmaalayo oo si wax ku ool ah u ilaalinaysa saamaynta dahaarka ee wax ku oolka ah. Isla mar ahaantaana, nuugista biyaha ee maaddadu way yaraataa, oo xaddiga biyaha lagu daray saamiga ayaa la dhimayaa, sidaa darteed wakhtiga qallajinta guud ee maaddadu aad bay u gaabinaysaa, taas oo gacan ka geysanaysa hagaajinta hufnaanta dhismaha.
Horudhaca perlite Hydrophobic
Tilmaamaha iyo Codsiyada Hydrophobic perlite
1.Hydrophobic perlite waa walxo dalool leh oo leh dhexroor ka kooban 0.15-5mm, oo leh cufnaanta cufnaanta hoose, inta u dhaxaysa 0.05-0.20g/cm3, waana doorashada koowaad ee alaabta buuxinta. Marka la barbardhigo buuxiyeyaasha kale ee macdanta, qaddarku wuu ka yar yahay, culeyska rarku wuu yar yahay, xaddiga polymer -ka ayaa la keydiyaa, sidaa darteed qiimaha badeecadda waa la yareyn karaa.
2.Kalabka korontada, nafaqaynta biyaha-celisa iyo dahaarka korontada ee wanaagsan. Maaddaama ay tahay alaab buuxinaysa, waxaa loo adeegsan karaa qalabyada kala duwan ee korontada ku shaqeeya iyo alaab -daboolidda. Waxay leedahay xasilooni kiimiko oo wanaagsan, biyo -celin xoog leh iyo adeegsi badbaado leh. Waxay hagaajin kartaa oo dareensiin kartaa cufnaanta cinjirka iyo jellada biyaha. Waa jaangooyaha cufnaanta ku habboon ee soo -saarka walxaha qarxa iyo jellada biyaha.
Xakamaynta sanqadha, perlite Hydrophobic wuxuu xannibi karaa oo nuugi karaa codka, waxaana loo adeegsan karaa qalabka dahaarka dhawaaqa, dahaarka dhawaaqa iyo nuugista dhawaaqa dhismayaasha.
4.Acid iyo iska caabin alkali, qaybaha ugu muhiimsan ee perlite Hydrophobic waa SiO2 iyo Al2O3, kuwaas oo ku dhow in dhexdhexaad ah, oo ay deggan yihiin dareeraha kala duwan, acids, alkalis, iyo cusbada. Waxaa loo adeegsadaa gaadiidka iyo kaydinta LNG ee badweynta, daaqa badda iyo agabyada buulinta adag ee xoogga leh ee badda.
5. Dhaqdhaqaaqa kuleylka hooseeya, oo leh kuleyliyaha kuleylka ah (0.036—0.054w/mk). Perlite Hydrophobic waxaa loo isticmaali karaa qalabka kuleylka kuleylka iyo qalabka kuleylka kuleylka.
6.Xasilooni kuleyl wanaagsan. Deggenaanshaha kuleylku wuxuu kor u dhaafayaa 1000 darajo Celsius, waxayna si gaar ah ugu habboon tahay dab-u-adkaystayaasha, dab-demiyeyaasha iyo qalabka dab-damiska.
Uma burburayo heerkulka sare mana fududa in la qaabeeyo. Sida buuxiyaha polymer -ka ah, waxay hagaajin kartaa guryaha dab -damiyaha ee polymers -ka waxaana loo adeegsadaa qalabka dhismaha iyo warshadaha rinjiga.
7. Heerka nuugista biyaha ee hoose: Heerka nuugista biyaha ee perlite Hydrophobic -ka ayaa ka yar 10%, kaas oo loo adeegsado buuxinta iyo yareynta isku -darka kaydadka iyo biyo -xidheennada.
Hore: u iibso Beeraha Beeraha badan ee beeraleyda ganacsiga
Xiga: macdanta perlite ee warshadaha ee soo saarayaasha macdanta